समाचार लेखेको भन्दै ‘पक्राउ पूर्जी’ - खबरमञ्च खबरमञ्च
समाचार लेखेको भन्दै ‘पक्राउ पूर्जी’
२४ पुस, खबरमञ्च, at 7:40 AM
By खबर मञ्च / January 8, 2018 / Comments Off on समाचार लेखेको भन्दै ‘पक्राउ पूर्जी’
काठमाडौं । डीआईजीहरूको विवादास्पद कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रकाशित गरेको विषयमा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले तीनजना पत्रकारलाई ‘पक्राउ पुर्जी’ जारी गरेको छ ।
परिसरका अनुसन्धान अधिकृत बेलबहादुर पाण्डेले सुशासन अनलाइन, शुभदिन र मूलधारन्युज अनलाइनलाई ‘सम्पादकलाई अविलम्ब यस कार्यालयमा उपस्थित गराउन’ भन्दै पत्र काटेका हुन् । सुशासन अनलाइनबाहेकका दुईले भने पत्र बुझेका छैनन् ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनको समाचार प्रकाशित भएका बेला शुभदिनमा खिलानाथ ढकाल सम्पादक थिए भने हाल अशोक अधिकारी सम्पादक छन् । सुशासन अनलाइनमा उत्तम अर्याल र मूलधारन्युजमा रवि धामी सम्पादक छन् । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
Published:5months ago on January 8, 2018
Last Modified: January 8, 2018 @ 7:40 am
Filed Under: छापामा, समाज
बुधबार प्रम ओलीले राष्ट्रपति सीलाई भेट्ने
विश्वकप फुटबलः कोलम्बियालाई एसियाली मुलुक जापानले हरायो
देवकोटाको पार्थिव शरीरमा पत्नी र ३ छोरीले दागबत्ती दिए
सँधैका लागि विदा भए डा. देवकोटा, पशुपतिमा अन्त्येष्टि
काठमाडौं । ट्यांकरमा हुने चुहावट रोक्न आयल निगमल लकिङ प्रणाली …
मन्त्रीको निर्देशन टेरेनन् उद्योगीले, किसान सिंहदरबार धाइरहन बाध्य
काठमाडौं । गत चैतको दोस्रो साता उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री …
सप्तकोसी नदीमा नयाँ ब्यारेज बन्ने
इटहरी । कोसी नदीमा नयाँ ब्यारेज बनाइने भएको छ । …
देउवाले भने, ‘आफू चुनाव हार्ने, दोष मलाई दिने?’
काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी भित्रकै घात अन्तरघातका …
उत्तर र दक्षिण कोरियाले घोषित युद्ध अन्त्यको घोषणा गर्ने
मलालामाथि आक्रमण गर्ने समुहका नाइके मारिए
ट्रम्प र किमविच भएका चार बुँदाका सहमतिमा के के छन् ?
किमले भने, ‘विश्वले देख्नेछ महत्वपूर्ण परिवर्तन’
किन पोख्छन् सडकमा किसानले दुध?
सुपरजोनमा चैते धानको उत्पादन बढ्यो, बजार छैन
पेस्तोल देखाउँदै हात खुट्टा बाँधेर डकौती गर्ने दुई जना समातिए
गोरेलाई काठमाण्डाैं सारिँदै, यस्ताे छ कारण !